ဖျောက်ဆိပ်ကြယ်စု - ဝီကီပီးဒီးယား
ခုနစ်စဉ်ကြယ် နှင့် မရောထွေးပါနှင့်။
ကိုဩဒိနိတ်: 03h 47m 24s, +24° 07′ 00″
Digitized Sky Survey မှ အရောင်ပါဝင်သော ဖျောက်ဆိပ်ကြယ်စု၏ပုံရိပ်
လေ့လာရေး အချက်အလက် (J2000 epoch)
3° 47′ 24″
၄၄၄ ly on average (၁၃၆.၂±၁.၂ pc)
မြင်သာသော ဒိုင်မင်းရှင်း (V)
M45, ညီအစ်မ ခုနှစ်ဖော်ကြယ် Melotte 22
အခြားကြည့်ရန်: ကြယ်အစုအဝေး၊ ကြယ်အစုအဝေးများစာရင်း
ဖျောက်ဆိပ်ကြယ်စု (အင်္ဂလိပ်: Pleiades) (/ˈplaɪədiːz/ သို့မဟုတ် /ˈpliːədiːz/) သို့မဟုတ် ကြတ္တိကာနက္ခတ် သို့မဟုတ် သူခိုးနက္ခတ် သို့မဟုတ်ညီအစ်မ ခုနှစ်ဖော်ကြယ် သည် ကြယ်အစုအဝေး (open star cluster) ဖြစ်ပြီး အလယ်အလတ်သက်တမ်း ရှိကြသော B-type ကြယ်များ ပါဝင်ကာ တောင်းရပ် ကြယ်စုတန်းတွင် တည်ရှိသည်။ ယင်းသည် ကမ္ဘာမြေနှင့် အနီးဆုံး ကြယ်အစုအဝေးဖြစ်ပြီး ညဘက်ကောင်းကင်တွင် သာမန်မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်သည်။ ထိုကြယ်အစုအဝေးအား ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း မတူညီသည့် ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာ နာမည်များ မှည့်ခေါ်ကြသည်။
ကြယ်စုအား အပြာရောင် ပူပြင်းသည့် အင်မတန်တောက်ပသောကြယ်များဖြင့် လွှမ်းမိုးထားကာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀၀ မီလီယံအကြာမှ ဖွဲ့တည်ခဲ့သည်။ တောက်ပသောကြယ်များကြားမှ မှေးမိန်သောဖုန်နယ်မြေသည် ကြယ်အစုအဝေးဖွဲ့တည်စဉ်က လက်ကျန်များဖြစ်သည်။ နက္ခတ္တပညာရှင်များ ခန့်မှန်းချက်အရ ဖျောက်ဆိပ်ကြယ်စုသည် နောင်နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ မီလီယံကြာသည်အထိ တည်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ထိုအလွန်တွင်မူ အိမ်နီးနားချင်းများဖြင့် ဒြပ်ဆွဲအားသက်ရောက်ပြီး ပျံ့နှံ့သွားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ရိုးရာ ဓလေ့အရ မနက် နေမထွက်ခင် အရှေ့ကောင်းကင်တွင် ဖျောက်ဆိပ်ကြယ် ပေါ်သောအချိန်အခါသည် မိုးစတင်ရွာတော့ မည် ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်ဖြစ်၍ ရှင်းလင်းထားပြီး လယ်ယာမြေ တို့တွင် မိုးဦးသီးနှံတို့ကို ချထားရတော့မည့် အချိန်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးနှိုးဆော်သော နိမိတ် ဖြစ်သည်။
၁ အမည်နာမ ဇာတ်မြစ်
၂ လေ့လာမှု ရာဇဝင်
၅ သက်တမ်းနှင့် အနာဂတ်ဟောတမ်း
၆ အတောက်ပဆုံး ကြယ်များ
၇ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဂြိုဟ်များ
နက္ခတ်ဗေဒ အမည်အားဖြင့် ကြတ္တိကာနက္ခတ်ဟု ခေါ်သည်။ ထိုကြယ်အစုကိုပင် ရည်ညွှန်း၍ မြန်မာအမည် ဖျောက်ဆိပ်ကြယ် သို့မဟုတ် ကြတ္တိကာကြယ်ဟု အနည်းကိန်းဖြင့် ခေါ်ဆိုလေ့ရှိသည်။ "ကြတ္တိကာကြယ် ခုနှစ်သွယ် ကြက်ငယ်စုသလို" ဟုသော ဆိုရိုးရှိသည်။ "တစ်မိုးလုံး ဖျောက်ဆိပ်ချည်းပဲ" ဟူသော မြန်မာစကားပုံရှိသည်။ ကြယ်နက္ခတ်များအကြောင်း မသိသူအား ကြယ်များအကြောင်း မေးသောအခါ တွေ့မြင်ရာ ကြယ်များကို ဖျောက်ဆိပ်ကြယ် ဟုသာ ခေါ်ဆိုနေခြင်း ကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်း စကားပုံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကြယ်များအကြောင်း မသိသူများပင်လျှင် ဖျောက်ဆိပ်ကြယ်ကိုတော့ ကြားဖူးကြကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။
ကြတ္တိကာနက္ခတ်သည် မြန်မာ့ရိုးရာနက္ခတ် ၂၇ လုံးတွင် တစ်လုံးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ယင်းနက္ခတ်ကို မီးနတ်မင်း အစိုးရကြောင်း ဆို၏။ 
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ SIMBAD Astronomical Database။ Results for M45။ 2007-04-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Parallaxes and proper motions for 20 open clusters as based on the new Hipparcos catalogue" (2009). Astronomy and Astrophysics 497: 209–242. doi:10.1051/0004-6361/200811382. Bibcode: 2009A&A...497..209V.
↑ Majaess၊ Daniel J.; Turner၊ David G.; Lane၊ David J.; Krajci၊ Tom (2011)။ "Deep Infrared ZAMS Fits to Benchmark Open Clusters Hosting delta Scuti Stars"။ arXiv:1102.1705 [astro-ph.GA]။
↑ Percival, S. M. (2005). "The distance to the Pleiades. Main sequence fitting in the near infrared". Astronomy and Astrophysics 429 (3): 887–894. doi:10.1051/0004-6361:20041694. Bibcode: 2005A&A...429..887P.
↑ Zwahlen, N. (2004). "A purely geometric distance to the binary star Atlas,amember of the Pleiades". Astronomy and Astrophysics Letters 425 (3): L45. doi:10.1051/0004-6361:200400062. Bibcode: 2004A&A...425L..45Z.
↑ ၆.၀ ၆.၁ Messier 45
↑ Gendler၊ Robert (2006)။ A Year in the Life of the Universe: A Seasonal Guide to Viewing the Cosmos။ Voyageur Press။ p. 54။ ISBN 1610603400။
ဝစ်ရှင်နရီ၊ အခမဲ့အဘိဓာန်တွင် Pleiades ကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။
Wikimedia Commons တွင် Pleiades (star cluster) နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
Photos and information on the Pleiades from the University of Calgary Archived3December 1998 at the Wayback Machine.
Information and images from the Anglo-Australian Observatory Archived 15 July 2005 at the Wayback Machine.
Maya Astronomy Archived6June 2007 at the Wayback Machine.
Doppler Imaging: Results Archived 8 February 2012 at the Wayback Machine. first Doppler image ofaPleiades solar-type G dwarf – HII314, Strassmeier & Rice 2001, A&A 377, 264
Hurst, John။ M45 – The Pleiades။ Deep SkyVideos။ Brady Haran။
Warburg Institute Iconographic Database (over 50 medieval and early modern images of the Pleiades) Archived4March 2016 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖျောက်ဆိပ်ကြယ်စု&oldid=726931" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။